Otu esi achọta gam akporo ekwentị ma ọ bụrụ na tufuo ya ma ọ bụ ezuru ya | Akụkọ akụrụngwa
Otu esi achọta gam akporo ekwentị ma ọ bụrụ na efuola ma ọ bụ zuru ohi
N'oge ndị a, idapụ ekwentị mkpanaaka anyị na sistemụ arụmọrụ nwere ike ịbụ ọdachi, nke anyị nwere ike itinye ọgwụgwọ. Ọ bụrụ na-efunahụ ngwaọrụ anyị ezuru, anyị nwekwara ike ịchọta onye ohi ekele maka edemede a nke anyị ga-akọwa nke ọma esi achọta ama gị ma ọ bụrụ na furu efu ma ọ bụ zuru ohi.
Maka nke a, anyị ga-amarịrị na site na kọmpụta ọ bụla anyị nwere ike ịchọta ngwaọrụ gam akporo anyị, ekele maka mmekọrịta nke Google mere. Naanị ịga na Njikwa Ngwaọrụ gam akporo na iji Ntọala Ntọala nke akaụntụ gị nke nnukwu dike achọrọ, ị ga-enwe ike ịchọta ngwaọrụ gị.
N'ezie, echegbula onwe gị, n'ihi na ugbu a, anyị achọpụtala otu esi eme ya ma ugbu a anyị ga-akọwa ya nzọụkwụ site na otu esi eme ya.
1 Ga-ejikọrịrị akaụntụ Google gị na ngwaọrụ gị
2 Nweta weebụsaịtị gam akporo Ngwaọrụ Manager
3 Idebe ebe etinyere na ekwentị gị nwere ike inyere gị aka
4 Nhọrọ ndị ọzọ na-adọrọ mmasị
5 Otu nhọrọ ọzọ; chọta ekwentị gị na akaụntụ Google gị
Ga-ejikọrịrị akaụntụ Google gị na ngwaọrụ gị
Ọ bụrụ na ị nwere ama ma ọ bụ mbadamba nwere sistemụ arụmọrụ gam akporo, ihe kachasị mma bụ na ị nwere akaụntụ Google mekọrịta, n'ihi na nnukwu ọchụchọ ahụ na-amanye gị ịme ya, mana ọ gaghị ezuru gị inyocha ya, ọkachasị ma ọ bụrụ afụbeghị gị ma ọ bụ ezuru ọnụnọ gị.
Iji jide n'aka na ị nwere akaụntụ Google ahụ Can nwere ike ịnweta menu "Ntọala" ngwaọrụ ma lelee ya na "Akaụntụ". Dịka ị pụrụ ịhụ na onyonyo a, akaụntụ Google gị kwesịrị ịpụta n'ụzọ yiri nke ahụ.
Nweta weebụsaịtị gam akporo Ngwaọrụ Manager
Android Ngwaọrụ Manager Ma ọ bụ ihe bụ otu ihe ahụ, gam akporo ngwaọrụ njikwa ga-ekwe ka anyị chọta anyị ama ma ọ bụ mbadamba na oke nkenke na ihe omume na anyị furu efu ma ọ bụ zuru ya.
Tupu ịbanye na weebụsaịtị a Google nyere maka onye ọrụ ọ bụla, ọ dị mkpa iburu n'uche ihe abụọ tupu ịmalite ịbanye.
Mbụ niile ị ga-akpachara anya na lelee na ị na-aga abanye na ukara gam akporo Ngwaọrụ Manager peeji nke, na bụ na netwọk nke netwọk jupụtara na peeji nke na-e imitateomi otu a nke Google nke ndị hackers na hackers na-achọ iji zuo okwuntughe na akaụntụ Google nke ndị ọrụ.
Ọ bụrụ na ị na-eji kọmputa ọha na eze ma ọ bụ nke ọtụtụ mmadụ nwere ike ịnweta, jiri nnọchi nzuzo na Google Chrome iji gbochie onye ọ bụla nke ga - eji ngwa ahụ mechara nweta akaụntụ Google gị na ebe ekwentị gị dị.
Idebe ebe etinyere na ekwentị gị nwere ike inyere gị aka
Ozugbo anyị abanye ma chọta onwe anyị n'ime ngwa ahụ, anyị nwere ike ịchọta ngwaọrụ anyị. Ọnụ anyị furu efu ga-enye ọnọdụ ya site na iji antennas ndị dị nso iji gosipụta ọnọdụ ya na usoro dị mfe a na-eji n'ọtụtụ ebe ndụ.
Iji naanị oke nke njehie nke ọnọdụ nke smartphone ma ọ bụ mbadamba ga-adị n'etiti 600 na 800 mita. Ọ bụrụ na anyị arụ ọrụ ọnọdụ na ngwaọrụ anyị, ọ ga-abụ naanị 20 mita n'ihi ya, ọ gaghị esiri anyị ike ịchọta ya ma ọ bụrụ na anyị efunahụ ya.
Obi abụọ adịghị ya na, dịka ọmụmaatụ, oriri batrị mgbe ị na-edebe ọnọdụ arụ ọrụ dị elu karịa, mana ọ bụrụ na ịchọta ebe ngwaọrụ anyị dị mkpa na arụ ọrụ ya. Ọ bụrụ na ị bụ akpachapụghị anya ma ọ bụ ewekarị ida gị ama, adịghị na-egwu ya na mgbe niile na-na ọnọdụ ọrụ.
Nhọrọ ndị ọzọ na-adọrọ mmasị
Gam akporo Ngwaọrụ Manager bụghị naanị na-enye ohere ka anyị chọta anyị mobile ngwaọrụ kamakwa na-enye anyị atọ ndị ọzọ kasị adọrọ mmasị na bara uru nhọrọ. Anyị ga-enyocha ha iji nwee ike iji ha mee ihe ma ọ bụrụ na ọ dị mkpa.
Ọ bụrụ na ngwaọrụ gị efunahụ, dịka ọmụmaatụ n'ụlọ, ịnwere ike ịme ka ọ gbanye site na njikwa Ngwaọrụ gam akporo iji chọta ya ngwa ngwa. Site na ịpị a nhọrọ ị ga-enweta ngwaọrụ ịmalite ịkpọ egwu na oke olu maka nkeji ise na-enweghị nkwụsị. Nanị ụzọ ịkwụsị ya bụ site na ịpị ike bọtịnụ na ọnụ.
Ọ bụrụ na ezuru ọnụ ọnụ ya ezigbo nhọrọ nwere ike ịbụ igbochi ya, ihe anyị nwere ike ime na nhọrọ nke abụọ nke gam akporo Ngwaọrụ Manager. Site na ịgbalite nhọrọ a, a ga-edochi ihuenyo ụlọ ọdịnala nke ngwaọrụ anyị site na iji otu paswọọdụ, nke anyị ga-ahọrọ onwe anyị. Na mgbakwunye, enwere ike ịgbakwunye ozi na dịka ọmụmaatụ adreesị ebe onye ohi ma ọ bụ onye chọtara ngwaọrụ ahụ nwere ike ịhapụ ya ka ọ bulie ya ozugbo anyị nwere ike.
Ọ bụrụ na ezuru ekwentị gị, ị nwere ike ịhapụ ozi na-eyi egwu iji weghachite ya, n'agbanyeghị na m na-atụ ụjọ na ọ gaghị eme ọtụtụ.
Ọ bụrụ na ọnweghị nke nhọrọ ndị dị n'elu enyerela gị aka ịchọta ngwaọrụ gị ma ọ bụ weghachite ya, oge eruola hichapụ ngwaọrụ ka onye ọ bụla ghara ijide data dị mkpa anyị, site na onyonyo nkeonwe anyị ma ọ bụ vidio ọ bụla anyị nwere ike ịchekwa.
Cheta na nhọrọ a bụ ihe siri ike ma na ọ bụrụ na ị kpebie ihichapu ngwaọrụ gị, ị gaghị enwe ike ịgbake n'ụzọ ọ bụla data ị debere na ya.
Otu nhọrọ ọzọ; chọta ekwentị gị na akaụntụ Google gị
N'ikpeazụ, anyị ga-egosi gị ụzọ ọzọ iji chọta ekwentị mkpanaaka gị ọ bụrụ na ọ furu efu ma ọ bụ zuru. Thenweta ntọala nke akaụntụ Google gị site na ihe nchọgharị weebụ, nke ị ga-enwerịrị esote adress, anyị nwere ike ịchọta ngwaọrụ anyị.
Ozugbo itinyere paswọọdụ ha chọrọ, ị ga-ahọrọ ndị nhọrọ "Chọta mkpanaka gị". Mgbe ahụ ị ga-enwetaghachi ụfọdụ nhọrọ dị nnọọ ka nke anyị nwere na Ngwaọrụ gam akporo Ngwaọrụ.
You jisiri ike ịchọta ma ọ bụ chọta ama gị maka ngwaọrụ na ụzọ anyị mere ka ị dịrị?.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Telephony » Mobiles » Otu esi achọta gam akporo ekwentị ma ọ bụrụ na efuola ma ọ bụ zuru ohi
Anyị nyochaa Samsung Galaxy S7 ihu, ekwentị dị mfe iji hụ n'anya
Etu esi lelee ma soro Euro 2016 ndụ